Kpido: waya ntanye | Martech Zone
Armature: Mgbatị Wireframing Maka onye na-ese foto CC / CS5 +
Wednesday, February 26, 2014 Tuesday, February 25, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ n'ime ndị enyi m na ụlọ ọrụ ahụ ejirila ihe ngosi ma Armature abịala - ndọtị $ 24 maka Adobe Illustrator. Armature nwere mkpokọta nke ihe maka echiche nke ngwa weebụ, ngwa mkpanaaka, yana saịtị weebụ maka ịdọrọ na dobe ntinye waya. Kedu ihe bụ waya waya? Dị ka Wikipedia si kwuo: Ebe nrụọrụ weebụ wayaframe, nke a makwaara dị ka atụmatụ nke ihu igwe ma ọ bụ na ihuenyo, bụ nduzi ọhụụ nke na-anọchite ọkpụkpụ nke usoro
Free na Easy Wireframing na Wireframe.cc
Fraịde, Jenụwarị 4, 2013 Fraịde, Jenụwarị 4, 2013 Douglas Karr
Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịmalite na ihe wayaframing bụ! Wireframing bụ ụzọ ndị na-emepụta ngwa ngwa iji gosipụta ọkpụkpụ ọkpụkpụ na ibe. Ihe ntanetị na-egosipụta ihe ndị dị na ibe ahụ na mmekọrịta ha na ibe ha, ha anaghị egosipụta ezigbo eserese eserese webatara. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ime ka onye mmebe gị nwee obi ụtọ, nye ha waya waya nke arịrịọ gị! Ndi bekee n’eji ihe nile site na pen na akwukwo, rue na Okwu Microsoft, n’iru
Ngwaọrụ Development Wireframe na-enwe mmekọrịta
Satọdee, Nọvemba 20, 2010 Sọnde, Febụwarị 17, 2013 Douglas Karr
Maka afọ gara aga, anọ m na-agba mbọ ịchọta ihe ntanetị dị mfe, gbakwunye ngwaọrụ, yana nwee mmekọrịta mmekọrịta nke na-eickedomi otu ihe HTML na ihe si arụ ọrụ. Nnyocha m gwụchara na Hotgloo. Site na saịtị ha: HotGloo bụ ngwa intaneti bara ọgaranya nke ezubere iji wuo waya izizi arụ ọrụ maka weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ weebụ. Mepụta na ịkekọrịta mmekọrịta zuru oke na ntanetị. Gị na ndị ọrụ ibe rụkọta ọrụ ma soro ndị ahịa kerịta ihe mmepụta ahụ.